हस्तमैथुन गर्न बढी रुचाउने केटा कि केटी ? – Gaule Media ::
Home/अन्य/हस्तमैथुन गर्न बढी रुचाउने केटा कि केटी ?
ramsharan२२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०३:२२
अत्यधिक हस्तमैथुनले महिलामा पर्ने असर
जीवनसाथीसंगको सम्वन्ध : जो महिला अत्यधिक हस्तमैथुन गर्छन् उनीहरुको वैवाहिक जीवनमा नकारात्मक हुन् सक्छ । अर्थात श्रीमान्संगको सम्वन्धमा दरार उत्पन्न हुनसक्छ । किनभने हस्तमैथुनको लतमा फसेका महिलाले विहेपछि पनि पतिसंगको यौन सम्वन्धमा रोमान्स गर्न रुचाउँदैनन् ।
हीमेच्युरिया हुनसक्छ : हस्तमैथुन गर्ने महिलाहरुलाई हीमेच्युरिया नामको विरामी हुनसक्छन् । यस्तो विरामी महिलाहरुमा पिसावबाट रगत आउन सक्छ ।
महिनावारीमा गडबढी देखिन सक्छ : नियमित हस्तमैथुन गर्ने महिलामा महिनावारीमा गडबढी हुनसक्छ । गुप्तांङमा शुखापन हुनसक्छ ।